Mesut Ozil oo xanuun ku seegay tababarka Arsenal ka hor kulankooda Liverpool – Gool FM
Mesut Ozil oo xanuun ku seegay tababarka Arsenal ka hor kulankooda Liverpool
(London) 02 Mar 2017. Mesut Ozil ayaa seegay tababarka Arsenal ee shalay ka hor kulanka sabtida ay la yeelan doonaan kooxda Liverpool horyaalka Premier League iyadoo uu laacibku la dhibtoonayo xanuun.
Gunners ayaa isku diyaarinaya kulanka adag ay ku wajahayaan wiilasha Klopp waxayna rajeynayaa inuu taam noqdo kubbad qaabeeyahooda reer Germany.
Ozil ayaa labo kulan sababo xanuun ku seegay bishii Janaayo laakiin Arsenal ayaa rajeynaysa iminka inuu dib ugu soo laaban doono xerada tababarka ee London Colney ka hor sabtida.
28-jirka ayaa kooxda reer London u saftay kal ciyaareedkan 29-kulan isagoona u dhaliyay sagaal gool.
Inkastoo ay jirto xanuunka cusub ee Ozil misane Arsenal ayaa helaysa war farxad leh ka hor kulanka Liverpool oo waxaa dhaawacyo uga soo kacayo oo tababarka dib ugu soo laabtay saddexdeeda xiddig ee Aaron Ramsey, Laurent Koscielny iyo Olivier Giroud.
Ibrahimovic oo u sheegay Man United waxa uu doonayo si uu qandaraas cusub ugu saxiixo
Sergio Ramos oo weeraray Gerard Pique